अधिक सर्मथकको वादशाह-थ्री स्टार क्लव, ४ पटकको आहा ! रारा बिजेता – Online Annapurna
अधिक सर्मथकको वादशाह-थ्री स्टार क्लव, ४ पटकको आहा ! रारा बिजेता
२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०३:२० March 11, 2020 114 Views
आरजू/अनलाइनअन्नपूर्ण/फागुन २८, पोखरा
थ्री स्टार क्लव नेपालको एक सफल, व्यवसायीक र चर्चित फुटवल क्लव, अधिक समर्थक रहेको समर्थकको वादशाह मानिएको फुटवल टोली हो । यो २०३१ सालमा पाटन दरवार स्क्वायर मंगलवजारमा स्थापना भएको थियो । त्यो बेलामा पाटन दरवारका युवाहरुले खेलकुदको विकास र खेलको माध्यमबाट समाजमा सद्भावना, एकता र भाईचारा वढाउन क्लवको स्थापना गरेका थिए ।
आज थ्री स्टार नेपाली फुटवल जगतको चर्चित क्लव बनेको छ । क्लवले फुटवल लिगको सुरुवात डि डिभिजनबाट गरेको थियो । द्रुत गतिमा क्लवको विकास गर्दै परिरपक्व हुँदै आयो । २०३९ मा थ्री स्टार क्लव ए डिभिजनमा उक्लिन सफल भयो । यसका ३८० आजिवन तथा १२९ जना साधारण सदस्य रहेका छन् ।
नेपालका फुटवल क्लवका टोलीहरुमा अधिक समर्थक बटुलेका क्लवहहरुमा यो एउटा क्लव हो । अहिलेसम्म चार पटक सहिद स्मारक एडिभिजन लिग जित्न सफल भएको छ भने पटक पटक राष्ट्रिय लिग जितेको छ । थ्री स्टारलाई रुस्लान भोड्काले मुख्य प्रयोजन गरेको छ । यो संगै रुस्लानले थ्रीस्टारलाई तीन वर्षको लागि ६६ लाख नगद दिने सम्झौता भएको थियो । क्लवले रहेक वर्ष रुस्लानबाट २२ लाख रुपैयाँ पाउने गर्छ ।
पहिलो पटक एएफसि कपको अन्तिम फाईनल चरणमा सहभागि हुनबाट बञ्चित
थ्री स्टार ले २०१५ मा नेपाल राष्ट्रिय लिग जितेको थियो । २०१७ मा एएफसि कप छनोट चरणमा आफ्नो स्थान बनायो । जसले समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै समूहको शिर्ष स्थानमा रहेको थियो । तर थ्री स्टार क्लवले समूह चरण पार गर्दा पनि एन्फाले तोकिएको समयमावधिमा एएफसिमा क्लवको नाम दर्ता गराउन सकेन । त्यसपछि थ्री स्टार पहिलो पटक एएफसि कपको अन्तिम फाईनल चरणमा सहभागि हुनबाट बञ्चित भएको थियो । एएफसि एशिया कपमा सहभागिता जनाउन नपाएपछि थ्रीस्टारले एन्फासंग ६० लाख क्षेतिपूर्तिको माग गरेको थियो । २०१७ को अक्टोवरमा एन्फा र थ्रीस्टारबीच १५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । एन्फाबाट न्याय नपाउँदासम्म थ्री स्टारले कुनैपनि नेपाली घरेलु फुटवल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएन ।
२०१७ को एएफसि एशिया कप छनोट चरणको नतिजालाई हेर्ने हो भने थ्री स्टारले इर्चिम एफसि संग २÷० को नतिजा निकालेको थियो भने नागनवल्र्ड संग १÷१ को बराबरी खेलेको थियो ।
घरेलु प्रतियोगितामा थ्री स्टारको स्थान
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग ४ पटक, १९९६÷९७, १९९७÷९८, २००४, २०१२÷१३ मा जितेको थियो । २०१५ मा नेपाल लिग १ पटक जितेको थियो । अन्य घरेलु प्रतियोगिताहरु बुढा सुव्वा गोल्ड कप ५ पटक जितेको पाईन्छ । २००५, २००७, २००९, २०१२ र २०१८ मा जितेको थियो ।
ब्रिटिस गोर्खा कप २ पटक २०१० र २०११, माईभ्यालि गोल्ड कप २ पटक २०१० र २०१८, आहा रारा गोल्ड कप ४ पटक २००७, २०११, २०१३ र २०१५ मा जितेको थियो । इटहरी गोल्ड कप १ पटक जितेको पाईन्छ २०७४ मा । अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा बोर्दोलोई कप १ पटक २०१६ मा जितेको थियो ।
यि हुन नेपालमा रहेका २७ चर्चित प्रतिष्ठिन फुटवल क्लवहरु :-
१ थ्री स्टार क्लब
२ एपीएफ क्लब
३ झापा ११ फुटबल क्लब
४ नेपाल आर्मी क्लब
५ ब्वाइज युनियन क्लब
६ मनाङ( मर्स्याङ्दी क्लब
७ नेपाल पुलिस क्लब
८ महावीर ११
९ मोरङ ११
१० रूपन्देही ११
११ सुनसरी ११
१२ सङ्कटा क्लब
१३ सुदूरपश्चिम ११
१४ हिमालयन शेर्पा क्लब
१५ लुम्बिनी फुटबल क्लब
१६ च्यासल युथ क्लब
१७ आरसीटि क्लब
१८ एनआरटी क्लब
१९ फ्रेन्डस् क्लब
२० साहारा क्लब पोखरा
२१ जावलाखेल युथ क्लब
२२ अन्नपूर्ण फुटबल क्लब
२३ मछिन्द्र क्लब
२४ सरस्वती क्लब
२५ बौद्ध फुटबल क्लब
२६ ब्रिगेड ब्वाइज क्लब र
२७ अफ्रिकन युनाइटेड क्लब/श्रोत :नेपाली वीकिपिडिया